Aaminnimo bilaabi laga yaabaa in sarrifka crypto
aaminnimo Investments, shirkad in uu kormeero $2.5 trillion hantida ee maamula, ayaa qorsheynaya buildout ee alaabta in ay riixaan lahaa suuqa ugu Seeraar in ay heerka ku xiga.
Intaa waxaa dheer, Aaminnimo waxaa shaqaaleynta si ay u dhisaan sarrifka ah hantida digital, sida lagu sheegay ad shaqo gudaha ah. Shirkadda ayaa raadineysa nidaamka injineer DevOps a “si ay u caawiyaan injineer, abuuro, oo loo hawlgeliyo ah sarrifka Digital Hantida labada daruur dadweynaha iyo kuwa gaarka.”
Shirkadda ayaa sidoo kale ka shaqeeya xal xabsiga crypto, sida ay ad kale oo shaqo.
Haddii aaminnimo si guul ah u bilawday cuntooyinkan, waxa ay u noqon mid ka mid ah dhaqaaqdo ugu weyn by a shirkadda Wall Street suuqa ee hantida digital.
Waa xusid mudan, CEO aaminnimo ee, Abiigayil Johnson, waa horurimarineed ah Seeraar.
Haddii aaminnimo ma bilaabi qurbaan sarrifka crypto a, waxaa muran ka mid ah dhaqaaqdo ugu weyn by a shirkadda weyn Wall Street suuqa crypto ee curdinka noqon lahaa, taas oo u taagan ku saabsan $350 billion.
Thailand tijaabooyin cryptocurrency Bangiga Dhexe
Bank taliyaha Thailand ayaa Veerathai Santiprabhob tilmaamay hadal dhawaan in koraya a bangiga dhexe lacagta digital jumlada uu hadda ku jiraa dhuumaha oo qayb ka ah dadaalka ballaaran ee dalka in trialing technology blockchain in qaybaha kala duwan.
mashruuca ayaa, magacaabay Inthanon, wadaaga magaca buurta Thailand ugu dheer, oo doonaya in la abuuro cryptocurrency blockchain gaar ah bangiga ee ku salaysan si ay u sameeyaan xawaalad isku xidhka dheereysa oo ka jaban labada.
Waxa uu sheegay in hadalka:
“dadaalka waa waddada loogu xaaro macaamil ganacsi si dhakhso ah oo ka jaban oo ay sabab u tahay ansixinta intermediation yar loo baahan yahay marka loo eego nidaamyada hadda.”
Northern Trust gudbiyo patent for kaydinta daqiiqo kulan on blockchain
Adeegyada maaliyadeed shirkadda Northern Trust guuleystay patent ah ay taageerto kor u diiwaanada kulan la isticmaalayo casriga blockchain.
Habka ugu isticmaalaan taxane ah oo heshiisyada smart in lagu soo qabto xogta la xiriira kulanka, oo ay ku jiraan diiwaanka kuwaas oo dhigto (illaha ka aaladaha ay qaadaan laga yaabaa in), markii shir ka dhacay iyo meesha.
Northern Trust hones in on kiis la isticmaalo gaar ah, data dhacdo, oo waxay ku hadla in shirkadda ee arrimuhu ballaaran ee ururinta xogta hawl marayo nidaam loo qaybiyey.
Coinbase ka dhigaa horumarka si ay u noqdaan nidaamsan adag securities
Cryptocurrency sarrifka Coinbase ku dhawaaqay Arbacadii in la samaynta Gaartay xagga ay gool ee ka hawlgala a Somailand-dealer dawladda dhexe nidaaminaya.
sarkaalka hawlgalka sare iyo Madaxweynaha Asiff Hirji qoray post blog shirkad in shirkadda waa in geeddi-socodka ah ee helitaanka liisanka Somailand-dealer a. Shirkadda dooni inay oggolaansho ka laga xoreeyo dalka ah. Securities and Exchange Commission (SEC) Hay'adda Jaangooynta Industry Maaliyadda (FINRA) in ay bixiyaan securities blockchain ku salaysan.
Report Kraken Daily Market for 06.06.2018
$118M baayacmushtari jireen dhamaan suuqyada maanta
publis baarlamaanka Midowga Yurub ...
elvera ayaa sheegay in: